Gbasara Anyị | Kunshan Gubang Nchebe akụrụngwa Technology Co., Ltd.
Kemgbe e guzobere ya, Yirentang ararala onwe ya nye ihe na-akpata nlekọta ịhụnanya na ahụike dabere na ụkpụrụ azụmaahịa nke "iburu omume ọma na obi ọma n'uche, ịzụlite ahụ, na ime omume ọma". Ihe nkpuchi KN95 nke Yirentang mepụtara gafere ule niile nke GB2626-2006, GB2626-2019 na ụkpụrụ EU nke EN149: 2001 + A1: 2009. A na-arụ ọrụ asambodo CE ma bụrụ nke SGS na ISO-9001-2015 gbaara. Maazị Chu Jiuyi, onye guzobere Yirentang, na-agbaso ụkpụrụ nke "ahụike na-enweghị obere ihe na nkpuchi iji zọpụta ndụ ndị mmadụ". Maka ịdị ọcha na nchekwa nke imepụta ihe nkpuchi, nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "ịghara itinye aka n'ihe ndị na-enweghị isi, ọ bụghị iji nweta uru dị ala", chọrọ ka ndị niile "Yirentang" nwee nsọpụrụ maka ngwaahịa, enweghị egwuregwu ụmụaka na ndụ, tinye mkpa na akụrụngwa, ma nụchaa njikọ mmepụta ọ bụla iji hụ na ngwaahịa zuru oke.
Hergbaso usoro ọgwụgwọ ọdịnala ndị China nke "ịkwado omume ọma na ịdị mma" nke agbasala kemgbe ọtụtụ puku afọ, Yirentang nọ na-agbaso usoro ọzụzụ onwe onye nke "iburu omume ọma na ịdị mma na ịzụlite ịdị mma na ahụ" kemgbe mmalite ya , ma jiri nlezianya na-agbaso ma na-agbasi mbọ ike maka izu oke iji mepụta ihe mkpuchi ịdị ọcha na akọ na uche na ụlọ ọrụ yana n'usoro iwu ahụike mba ụwa. Ngwaahịa ya bụ ihe ama ama maka ihe eji achọ mma ha, ọmarịcha nkọwa na ọmarịcha ọrụ. Ọ bụ ezie na ngwaahịa ndị a abụghị ngwaahịa ọgwụ, Yiren Tang ka na-agbaso echiche nke "etinyela obere ihe, atụla arọ na umengwụ", ma chọọ ka ndị ọrụ niile nwee nsọpụrụ maka ndụ na ahụike, attentionaa ntị na ogo ngwaahịa, ma duzie nlekọta na nlekọta onwe iji hụ na mmepụta ngwaahịa a zuru oke ma zuo oke, nke mere na ndị agadi na ndị na-eto eto adịghị aghọ aghụghọ ma nwee akọnuche dị ọcha.
Zụlite obi na omume ọma
Aha Yirentang gụnyere na nkwanye ùgwù maka ndụ na ahụike. Yi nwere nkọwa pụtara, ka anyị wee bụrụ ndị nche nke ndụ na ahụike, na-enweghị nsogbu ọhaneze, ma na-agbaso nkwenye ahụike; ebere bụ ụdị obiọma, nke bụ ụkpụrụ omume nke ndị dọkịta ma ọ bụ ndị na-emepụta ngwaahịa ahụike ga-enwerịrị. Ọ na-ewe ndị mmadụ dị ka ihe kachasị mkpa, na-eme ebere ma na-echekwa ebumnuche mbụ. Nke a abughi nani ihe ịrịba ama, nke nwere mmetụta nke ozi akụkọ ihe mere eme, kamakwa ntụziaka ezinụlọ nye onye guzobere, Maazị Chu Jiuyi, na ụmụ ya. Ọ ga-aga n'ihu mmụọ nke ịchọ eziokwu ma ghara iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Iji hụ na àgwà nke ngwaahịa, Yirentang A na-eji ihe eji ekpuchi ihe eji eme ihe eji eme ihe n'oge a. Emechara njikọ njikọta niile na ụlọ ọrụ na-enweghị ntụ. A na-ahazi usoro nnwale atọ, ya bụ nnwale akụrụngwa, nnwale ngwaahịa agachachachara na nnwale ngwaahịa emechara iji hụ na ihe nkpuchi ahụ chọrọ ihe achọrọ na njikọ ọ bụla.
Chọọ na Innovation
N'oge a, dabere na ọdịbendị magburu onwe ya banyere omume, Yirentang nọ na-eme mgbanwe ọhụụ ma na-enyocha ngwaahịa dị elu na ngwaahịa mkpuchi siri ike mgbe niile, na-eduga omume nke ejiji dị mma ma na-agbasi mbọ ike ibi ndụ dị mma ma dị mma. N'ime usoro yrt2.0 nke emepụtara ọhụụ, a na-eme ka mmekọrịta anụ ahụ na ikuku nke ikuku nke ihe mkpuchi dị n'ime ahụ sikwuo ike. Mgbe ị na-emewanye ọrụ nchedo, ọ na-eme ka onye ọrụ nwee ahụ iru ala, nke kwesịrị ekwesị maka ndị nwere ahụ ike, ma na-eme ka ngwaahịa ndị dị ọcha na-aga n'okporo ụzọ ahụ dị mma ma dị mma, na-eburu n'uche mkpa onye ọrụ ọ bụla na ezigbo obi ụtọ. Na mmalite oge nyocha na mmepe, iji meziwanye arụmọrụ na ahụmịhe nke ihe nkpuchi, a họpụtara ndị mmadụ dị iche iche ka ha sonye na nnwale mbụ nke ngwaahịa mkpuchi, yana ihe karịrị 30 data nyochachara nke ọma iji meziwanye ụkpụrụ ngwaahịa.
Iguzosi ike n'ezi ihe na ibu ọrụ
Na mbido afọ 2020, n'ihi nsogbu nke okpueze ọhụrụ ahụ, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nlekọta ahụike nọ n'ọgba aghara, yana ngwaahịa nkpuchi bụ ndị mbụ buru ibu. Na nrụgide, Yirentang na-agbaso ụkpụrụ mgbe niile "ịghara ịbawanye ọnụahịa ma ghara iwetula ọkọlọtọ". Site na ebumnuche nke "ịghara ịbawanye ọnụahịa ma ghara iwetula ọkọlọtọ", Yirentang na-emeso ndị ọchụnta ego n'eziokwu ma na-emeso ndị ọrụ ha nha nha, iji nye ọha na eze ihe mkpuchi nchekwa dị mma ma dị nchebe iji tigharịa ihe isi ike. Ntughari abụrụla ntọala nke ntọala Yirentang na ọha mmadụ na ụlọ ọrụ na-eduga. Ihe anyi kwere anyi na nkwa aghaghi ime na nke anyi choro ime aghaghi ime nke oma. Naanị otu a ka anyị ga - esi nweta ihu ọma na ihu ọma ndị ọha na eze. Ezigbo okwukwe bụ ntọala azụmahịa. "Yirentang" na-ekwe nkwa na ọ bụrụ na ịzụta ụdị ngwaahịa a, ọ bụrụ na ị gafere ịgafe ebe ahụ wee nwalee, ị ga-enweta nkwụghachi zuru ezu.
Voba uru n'ụwa
Yirentang na-ekere òkè na ọrụ enyemaka ọha na eze, na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mma, ọhaneze mara ya nke ọma, ọ bụrụla ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya na ụlọ ọrụ ahụ. N'ime, anyị kwesịrị iji mmụọ nke Yirentang gbaa ndị ọrụ ahụ ume ka ha guzobe ụkpụrụ omume ahụike dị mma, ịmara nka na mmụọ ọrụ, gbaa ịnụ ọkụ n'obi, ebum n'uche na imepụta ihe, ma bulie echiche nke ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Yirentang dị n'okpuru akara KN95 nkpuchi nke Kunshan Gubang na-echebe ngwaahịa Technology Co., Ltd. ụlọ ọrụ ahụ dị na Kunshan Zhengyuan Chuanghui Technology Industrial Park, na-ekpuchi ngụkọta nke 9878 square mita, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2000 square mita na-eji maka mmepụta nke nkpuchi KN95, na-eweputa kwa ụbọchị 500000. Ugbu a, e nwere ihe karịrị ndị ọrụ 100. The meltblown ákwà adopts anụ ụlọ ama ika (Jiangsu jinmeida New Ihe Co., Ltd.), na ngwaahịa na-emepụta Ọ na-exported karịa mba 20, dị ka United States, Brazil, Australia, Canada, India, Japan, South Korea, Thailand, Vietnam na Malaysia, na mkpokọta ahịa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 10.
Yirentang - mee ka ume dịkwuo mma!